जन्म दिनको खर्च बृद्ध राम बहादुर राईलाई सहयोग — KhabarTweet
जन्म दिनको खर्च बृद्ध राम बहादुर राईलाई सहयोग
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ समय: १७:५८:५२
न्यानो कपडा लगाई दिँदै
भोजपुर–सामाजिक सञ्जालमा हाल भाईरल भईरहेको बृद्ध राम बहादुर राईलाई बुधवार विहान शिवम् सप्लायर्स तथा आईएमई सेन्टर दिंलाका सञ्चालक सरिता श्रेष्ठले जन्मदिनको अवसरमा सिरक, डसना, तन्ना र सिरानी प्रदान गरेकी छिन् । आफ्नो जन्म दिनमा विभिन्न मनोरञ्जनमा हुने खर्चले बृद्ध राईलाई पाँच हजार बराबरको लत्ताकपडा सहयोग गरेकी छिन् । साथै सोहि दिन राईलाई किरात राई यायोख्खा दिंला शाखा, न्यु समिट बोर्डिङ, व्यापारी रमेश कटवाल, व्यापारी कुमार गुरुङ, बुढाशुव्वा हार्डवेयर, यल्लो रिभर ग्रुपले लत्ताकपडा, चामल, दाल, विस्कुट लगायतका सामाग्री प्रदान गरेका छन् ।
यस भन्दा अगाडी सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्थानीय सरकारको उल्लेख्य सहयोग भने आउन नसकेको अवस्था रहेको छिमेकीहरु वताउँछन् । उनका मुख्य सहयोगि भनेको छिमेकीहरुनै हुन । उनलाई चिया, खाना, तातो पानी छिमेकी मंगल बहादुर तामाङ र हर्क कुमारी राईले दिईरहेकाछन् ।
को हुन त भाईरल बृद्ध?
सामाजिक सञ्जालमा कारुणिक तस्विर सार्वजानिक भएपछि भाईरल भएका बृद्ध भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका ३ खार्ताम्छा गैरीगाँउका ७८ बर्षीय राम बहादुर राई हुन । १७ बर्ष अघि श्रीमतीको मृत्यु भएपछि एक सुस्तमनस्थितिका छोरा र एक छोरी सँग वस्दैआएका थिए । केहि बर्ष अघि छोरीलाई मामा नाता पर्नेले पढाईदिन्छु भनेर तराईतिर लगेर सम्पर्क विहिन भएपछि आँफु साहाराविहिन भएको राईले खवरट्वीटसँग गुनासो गरे ।
कसरी भाईरल भयो तस्वीर?
बृद्ध राम बहादुर राईको तस्वीर कुनै सञ्चार माध्यम वा सामाजिक अभियान्ता वाट शुरुमा भाईरल भएको होईन । स्थानिय खार्ताम्छा स्वास्थ्य चौकीकी एक स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य उपचारकोलागि बृद्ध वसिरहेको छिमेकी मंगल बहादुर तामाङको दाउरा राख्ने गोठमा पुगेर फोटो फेसवुकमा राखेपछि भाईरल भएको सोहि वडाका वडाध्यक्ष गणेश अधिकारीले वताए ।
कस्तो छ त उनको अवस्था?
बृद्ध राम बहादुर राईको अवस्था दयनिय रहेको छ । बुधवार विहान सञ्चारकर्मी, स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ दिंलाका अध्यक्ष, किराँत राई यायोख्खा षडानन्द नगर कमिटिका पदाधिकारी तथा न्युसमिट वोडिङका सञ्चालकहरु उनिवसिरहेको गोठमा पुग्दा उनि दयनिय अवस्थामा आगो तापिरहेका थिए । असोज १८ गते देखि रिंगटा लाग्ने, खोकी, ज्वारो आउने, खाना नरुच्ने समस्या केहि दिन देखि खुट्टा चल्न छोडेको उनले खवरट्वीट सँगको कुराकानीमा वताए । आँफु सँग रहेका एकमात्र सुस्त मनस्थितिका २३ बर्षीय छोरा मन कुमार राईको भर नभएपछि आफ्नो घर छोडेर सहाराको लागि छिमेकी मंगल बहादुर तामाङको घरमा शरणलिन पुगेका हुन् ।
बाँच्न चाहन्छु मलाई बचाउँनुहोस्
बृद्ध राईले आँफु बाँच्न चाहेको वताएकाछन् । आँफु तन्दुरुस्त भएर सुस्त मनस्थितिको छोरालाई हेरचाह गर्ने उनको चाहना छ । कोहि सहयोगी आएर आँफुलाई सहयोग गर्नको लागि उनले अपिल गरेकाछन् । रिंगटा लाग्ने समस्या ठीक भएमा मात्र पनि केहि बर्ष अझै बाच्ने उनले उनले हिम्मत गरेकाछन् । छोरा सँगै लगेर उपचार गरिदिए उपचारको लागि जान तयार रहेकोपनि राईले खवरट्वीटलाई वताए ।